Muuqaal: Magaalada Ceelbuur ilinta ka Qubaneysa halaga tiro hadii ay Dadnimo jirto!! - Hablaha Media Network
Muuqaal: Magaalada Ceelbuur ilinta ka Qubaneysa halaga tiro hadii ay Dadnimo jirto!!
HMN:- Degmada Ceelbuur oo kamid ah degmooyinka ugu qadiimisan dalka Soomaaliya guud ahaan ayaa xilligaan waxaa ka qubanaya ilin aad u badan oo aysan la qabin deegaannada kale ee dalka.
Ceelbuur waxa ay deegaanada kale ee dalka la wadaagtaa abaarta baahsan ee dad iyo duunyaba baabi’isay hase yeeshee dhibaata ayaa u gaar ah, mana jirto xilligaan sida muuqata cid u damqaneysa oo u taagan in ay xalliso
Degmada ayaa iska oynyesa maadaama ay dareemeyso go’doon aysan la qabin deegaanada kale ee dalka iyo dhibaato ay ka geysanayaan ciidamada Ethiopia ee saldhigga ku leh gudaha degmada Ceelbuur.
HALKAN KA DAAWO HEESTA CEELBUUR
Itoobiyaanka saldhigga ku leh Ceelbuur marka ay safar aadayaan waxa ay sii dilaan Shacabka ay wadada ku arkaan, marka ay ciidamo kale u imaanayaanna shacab kale ayey soo laayaan sida ku cad warbixin uu dhawaan Qoray wariye Cabdullahi Cusmaan Faarax.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa waxa ay sheegeen in hooyo ceelbuur ku sugan oo cabsi ay ka qabto Shabaab ugu dhawaatay saldhigga Itoobiyaanka in ay xanuunsatay una baahatay in caafimaad loogu qaato meel ka baxsan deegaanka si arinteeda wax looga qabto, hase yeeshee Itoobiyaanku ay diideen in ay ku qaadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee sahayda u keena halkaas oo laga dhedhensan karo in ku qanacsanyihiin shacabka dhamaanaya.
Ciidanka Itoobiya waxaa kale oo aysan wax caawimaad ah siin qoysaska ar ee degan deegaanada ku dhaw saldhigooda iyada oo taa bedelkeeda ciidanka Soomaalida ah ee Ceelbuur jooga ay garaamkooda wax ka siiyaan qoysaskaas aan meelna uga bixi Karin Ceelbuur.
Gudoomiyaha degmada Ceelbuur aaa sheegay in dadka deegaanka dhibka ay qabaan looga bixi karo uun in saldhigga Itoobiyaanka laga raro degmada si shacabka duurka galay ay ugu noqdaan degmada kadibna howlihii caadiga ahaa ay dib u bilaawdaan.
Waxa uu yiri, “Ceelbuur wanaag waxaa ugu horeysa maalinta ay ka baxaaan Ciidanka Itoobiya”
Inta badan dadka wax falanqeeya ayaa waxa ay sheegayaan in xilligaan Ceelbuur aysan u baahneyn ciidan Itoobiyaan ah oo saldhigya ku sameesta maadaama aysan jirin cid ay difaacayaan oo joogta, waxa ayna soo jeedinayaan in ciidankaasi si dhaqsa ah looga saaro si qoysaska ka baqday ay ugu laabtaan magaalada nolosha degmadana ay u soo laabato.
Dad badan ayaa waxa ay ku andacoonayaan in degmada hadii ciidanka Ethiopia laga saaro ay shabaab la wareegayaan arintaas oo ah fikir qaldan marka loo eego xaaladda hada la joogo maadaama ay jiraan deegaanno badan oo hadda Shabaab ay gacanta ku hayaan nololna ay ka jirto.
Aniga Cabdifitaax ah ee qormadaan sameeyay waxa aan ka codsanayaan madaxda sare ee dalka in si dhaqsa ah ciidanka Itoobiya looga saaro degmada Ceelbuur si ilinta ka qubaneysa looga tiro ayna wax ula qeybsato deegaanada kale ee Soomaaliyeed.z